Jaaliyada Warsangeli ee UAE oo wadatashi la yeelatey Suldaan Saciid
Dubai Wednesday, June 20, 2007
Suldaanka guud ee Beesha Warsangali oo in mudo ah safar ku joogaay dalka Emaaraatka carabta ayaa waxa uu kulamo is daba jooga la yeeshay xubnaha jaaliyada dhalinyaradda iyo aqoonyahanka wax garadka Beesha Warsangali ee ku nool Emaaraatka Carabta.
Kulankan maanta oo uu soo qaban qaabiyey Gudoomiya Gudida qaban qaabada soo dhawaynta Suldaanka Eng. Baashe Maxamuud Maxamed Shire ayaa waxa ka soo qayb galay xubno isugu jira aqoonyanaho iyo
dhalinyaro iyo waayeel. Waxaa kulamadaas dhamaan laga hadlayey maslaxada guud ee dalka sidii looga wadatashan lahaa beesha warsangalina hadaf siyaasadeed oo midaysan u yeelan lahayd.
Sidii looga qayb gali lahaa shirwaynaha dib u heshiisiinta Soomaaliya ee lagu casuumay dhamaan qabaa'ilka Somaaliyeed inay ka soo qayb galaan iyo qodobo badan oo ku salaysan maslaxadda guud ee mandaqadda
Waxaana dhamaan la isku afgartay Suldaanka iyo jaaliyaddu wixii talooyin iyo wada tashi ku saab sanaa.
Waxaa kaloo Suldaanka safar ugu yimi Aqoonyahan Cumar Cabdi Cali Bayr oo Suldaanka kulan la yeeshay iyagoo ka wada hadlay arimaha horumarka dalka sida mashruuca Dekeda LaasQoray, iyo Sidii loo abuuri lahaa mashriic lagu dabaalayo baahiyaha ka jira mandaqada.
Waxaa Sidoo kale xubnaha Jaaliyadda Emaaraatka ee Beesha Warsangali oo ka kooban Aqoonyahano, iyo dhalinyaro Wax garad ay Suldaanka u soo gudbiyeen Xubnaha jaaliyada Warasangali ee ku nool dalkan Uga qayb galaya shirwaynaha Dib u heshiisiinta Soomaaliya oo u gu horeeyo Mudane Abdi Aziz Mohamed Abdi Aar. Suldaankuna uu halkaas ku anxisiyey.
Waxaa kaloo Suldaanku magacaabay Xubinta Xiiriiyaha guud ee jaaliyadaha dibadaha Mudane Axmed Cabdi Raxmaan Siciid Buraale oo ahaa gudoomiyhii jaaliyadda Dhalinyarada.
Waxaa gaba gabadii lagu afjaray kulamadii jaaliyaddu la yeelatay Suldaanka guud ee Beesha Warsangali in la yeesho xidhiidh joogta ah iyo dedaalo dheeraad ah oo lala yimaado dal iyo dibadba sidii looga gudbi lahaa dhamaan duruufaha jira.
Abdi aziz Mohamed Abdi Aar